Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa hamma barbaadde uumuu dandeessa.
Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa Uumuu
Jecha Kasaa Hiika-Fayyadamaatti dabaluu barbaadde fili.
Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galchii Tarrobarroo fili.
Qabdoo Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa Haaraa sanduuqa Kasaa tti aanee jiru cuqaasi.
Maqaa kasaa sanduuqa Maqaa keessatti kaabuun TOLE cuqaasi.
Jecha(oota) filataman gara kasaa haaraatti dabaluuf Saagi cuqaasi.
Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa Saaguu
Galmee keessa bakka kasaa itti saaguu barbaaddu cuqaasi.
Dirqalaalee barbaadde kamiyyuu fili.
Gabatee Qabiiyyeewwanii Uumuu
Galchiiwwan Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Hiikuu
Haaressuu, kasaawwan fi gabatee qabiiyyeewwanii Gulaaluu fi Haquu
Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Dhangeessuu
Galchiiwwan Kasaa fi Gabatee Gulaaluu ykn Haquu
Kasaawwan Tartiiba qubeen Uumuu
Title is: Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa